Bhodhi Game Ongororo yeRedcliff Bay Zvakavanzika: Bhokisi reChakavanzika Kunakidzwa - Game Poindi - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo.
Yakatumirwa ne Andre Volkman | Kurume 31, 2022 | Mitambo yebhodhi nemakadhi, nhau, Ongororo, pamusoro
Chikamu 71%Chikamu 71%
Muyedzo yeRedcliff Bay Mysteries takaenda kuEngland yekare. Mitambo yechirahwe - sezviri pachena musika hauchashandi pasina ivo. Mugore rega rega remutambo mitsva yebhodhi kana makadhi inooneka umo iwe unofanirwa kuita seimwe mhando yemuongorori. Dzimwe nguva vaparidzi vanoenda kunotevera, dzimwe nguva vanodzokorora-uye dzimwe nguva vanouya nechimwe chinhu chakafanana nemakwikwi, asi zvichiri kushamisa. Sezvakangoita mutambo webhodhi Redcliff Bay Mysteries neKosmos.
Iro zano rekutanga reRedcliff Bay Mysteries rakatanga rekirasi: dhorobha diki, kune kudiki kunofamba mumhepo. Mushure mekudanwa kwekubatsira, vatambi vanomhanya kuti vaone zvakaitika muguta remahombekombe. Ikozvino hapasisina ruzivo - Kosmos inoshandisa inozivikanwa inozivikanwa yekupukunyuka puzzle pfungwa kuti vatambi vaongorore nhanho nhanho. Izvo zvega zvinokurudzira, nekuti hauzive nyaya kana mabasa uye nekudaro matambudziko anouya kwauri. Vanosvika vatambi vashanu vanogona kushanda pamwe chete - unogona zvakare kutamba wega kana uchida, asi haufanirwe kuzviita. Sei? Nekuti mitambo yebhodhi yerudzi urwu inopa inovaraidza solo mapuzzle, asi yakajairika puzzle ndiyo moyo wepfungwa yemutambo.
Mhosva ina nhatu uye dzidziso
Mhosva ina dzakasanganisirwa dzinofanirwa kuzadzikiswa mukurongeka kwadzo. Ivo vanovaka pane mumwe nemumwe, yekutanga kesi inoita sedzidziso. Chishamiso chekutanga ndicho chinhu: mhepo inotsanangura iyo nemazvo. Izvi zvinoita kuti zvive nyore kuti vatambi vanyure munyaya. Chishamiso chechipiri: pane nyaya chaiyo uye kwete mapikicha emapuzzle sechikurudziro chekutanga nekutsungirira. Boka rakarima nemuRedcliff Bay "neawa".
Mabhokisi mana mubhokisi rimwechete - chaizvo makesi matatu pamwe nedzidziso. Mufananidzo: Volkman
Makadhi anotaura nyaya yacho zvishoma nezvishoma. Uye nezviitiko zvitsva, nzvimbo itsva kana vanhu vanouya kuzotamba, izvo zvinoumba hwaro hwekugadzirisa puzzle. Mafungiro akafanana anozivikanwa kubva kumitambo yevatikitivha, asi muRedcliff Bay Mysteries zviratidziro zvinogara zvichiitika munzvimbo diki, zvekuti iwe unofanirwa kutarisa zvakanyanya kuti uwane zviratidzo. Pakupedzisira, boka rinosarudza kuti ndezvipi pane izvi zvakakosha - mimhanzi sechiito cheboka inoumba chikamu chikuru chekukwezva kwemutambo webhodhi we cosmos. Pano neapo, ma tokeni anoita kuti zuva nezuva basa rekuferefeta rive nyore mune dzimwe nguva nekuti zvipimo zvepanzvimbo zvakapfava.
Iyo yakajairika "Cluedo" mhedziso inogara iri pakupera kwebasa remutikitivha: Ndiani ane mhosva? Chii chaitika? Vatambi vanongoziva chete kana vakazviwana zvakanaka - kana kuti zvimwe zvisizvo - kana kadhi rekutanga ragadzirisa.
Redcliff Bay Mysteries: Nyaya seNyeredzi
Imwe yesimba guru reRedcliff Bay Mysteries yatove nengano-hungwaru, nekuti nyaya ina dzinovaka pane imwe neimwe, dzinoshandisa pfungwa dzakafanana, asi dzichiri kutamba zvakasiyana kuti dzionekwe sezvizvi. Kutanga kwekubiwa kwependi hakuna kudzika, asi hakuna kunakidza zvishoma, mushure mezvose, sumo inopa chakavanzika chekubata mumutambo wakatwasuka wekuferefeta. Kuenzaniswa nemimwe mitambo yebhodhi yevatikitivha, Redcliff Bay Mysteries inopenya nezvimwe zvinonakidza zvinomonyoroka uye zvinokatyamadza munhau, kunyangwe iwe uchigona kufungidzira kune mamwe acho zvichienderana nekufamba kwenyaya. Panyaya yekutamba, hafu yechipiri yezvese zvirimo kunyanya inomira pachena, nekuti pano vagadziri vanotambawo nemasinhaniti anozivikanwa kubva kuzita rekutiza rekodhi decryption. Uye kuguma kukuru? Izvo zvinofanirwa kutanga kukuita kuti uzunguze musoro wako, asi wozogadzira grandiose aha maitiro.
Maitiro: Verenga iyo intro uye wobva waenda. verenga mitemo? Mudiki kune chero. Mufananidzo: Volkman
NeRedcliff Bay Mysteries, Kosmos inopa iyo zvino ine guruva rekuongorora mutambo rudzi hutsva hutsva: Tarisiro iri pachena pane nyaya, asi iwe unofanirwa kuita zvimwe zvibvumirano, zvirinani mukuoma kwepuzzle. Iyo yakatarisa inoita kunge iri pakuzorora uye kufambira mberi kwemvura, uye nemukana wekusangana nenyaya yakanaka yakazara. Chero zvazvingave, iko kuwirirana kwakabudirira, nekuti kuseri kwezvimwe zvisizvo kutaurirwa uye kazhinji puzzle-tekinoroji kana mechanic mitambo yekuferefeta, Redcliff Bay Mysteries inoita senge hunyanzvi hwekuita.
Detective mutambo wese-inotenderedza: Zvakanaka kwese kwese, hapana chakatanhamara
Unoda inokwana awa imwe pakesi, saka nguva yese yekutamba ipfupi. Izvo hazvikanganise kunakidzwa, iwe unongofanirwa kunge wakagadzirira chokwadi chekuti Redcliff Bay Mysteries imhando ye "itamba uye ukanganwe" chiitiko, kunyangwe nedombo diki rinofanirwa kupa vanogadzira mukana wekuwana. kunze kwema singles -board mitambo yakatevedzana nekutevera-pane zvemukati - tichifunga nezvemhando yemutambo wepuzzle, zvingave zvinonyadzisa kana Kosmos ikasasvetuka pamukana. Kunyanya nekuti Redcliff Bay Mysteries inogona kutepfenyurwa kuridzwa kakawanda, sezvo zvinhu zvisina kuparadzwa. Saka kuchinjisa kunoda.
Kune mitambo yebhodhi umo mitambo yega yega inotora nguva yakareba kupfuura iyo yese yemitambo yeRedcliff Bay Mysteries - vateveri veiyo genre vanongofara zvakanyanya kutsungirira kukanganisa, zvisinei, nekuti kukosha kwevaraidzo yemutambo uyu wekuferefeta kwakakwira. Iyo nhanho ndeye yemitambo yakaita seDetective: Nyaya dzekutanga - Kosmos zvakare yakanangwa kune vanotanga, mhuri kana mapoka akasanganiswa evatambi. Redcliff Bay Mysteries ine mwero wepakati wekuomerwa, asi mutambo wekuferefeta hauna matambudziko: Mhosva nhatu neina kunyanya dzine mamwe chaiwo ehuropi teas uye mabasa anotoda kuderedzwa uye kunzwa kune zvakakosha.
Redcliff Bay Mysteries imhando yese-inotenderedza: inopa yakanaka mapuzzle, yakanaka kubatana pakati pemakesi, uye nyaya yakanaka. Mutambo webhodhi hauna kushamisira mune chero yenzvimbo, asi mhedzisiro yacho yakabatana zvekuti iyi Kosmos zita rinogona kuverengerwa pakati peakanakisa mumhando panguva ino.
Redcliff Bay Mysteries inotaridzika zvakanaka patafura - inodzokera kunguva dzeVictorian. Mufananidzo: Volkman
Kurongeka kwega kunonakidza: Zvakavanzika mudunhu reSummerset kumaodzanyemba-kumadokero kweEngland? Munguva yeVictorian? dhorobha regungwa? Tichifunga nezvemamiriro ezvinhu, munhu haagone kubatsira asi kufunga nezveSherlock Holmes uye runako rwakakosha rwenguva. Redcliff Bay Mysteries inoshandisa izvo chaizvo uye inoruka nyaya inonakidza yakaitenderedza. Nyaya yacho inogara ichifananidzirwa zvakakodzera - optics inotsigira mhepo.
Iko hakuna kufungidzira kwakashata mumutambo webhodhi, izvo zvinosimudza mwero wekuomerwa kusvika padanho rakagadzikana: boka remubatanidzwa remuongorori rinogona kungoshanyira imwe yenzvimbo dzakatarwa pamutambo kutenderera. Uku kudzikisira kunova chipingamupinyi, kunyanya gare gare mumutambo, izvo zvitokisi zvechiito hazvigone kutora. Imwe nzira: ingoita imwe nhamburiko paunenge uchigadzirisa matambudziko ekubvisa pfungwa.
Nhamba yevatambi: 1 kusvika 5
Nguva yekutamba: anenge 40 kusvika 60 maminetsi (panyaya)
Kuoma: nyore kusvika pakati
Kukurudzira kwenguva refu: kuderera
Category: mutambo wemhuri
Sub Category: Puzzle Game
Core Mechanisms: Kubvisa, Kudyidzana, Puzzle, Musanganiswa
Vanyori: Matthias Prinz, Martin Kallenborn
Mienzaniso: Martin Hoffmann, Claus Stephan
Mutengo: 35 euros
Bhokisi remutambo rine mabhokisi mana madiki emutambo - kunyangwe iyi trick ine hungwaru hunoshamisa. Mabhokisi ane akasiyana mini puzzle mitambo, imwe neimwe iine yakanyanya kutamba nguva yeawa imwe. Chinonyanya kukosha: makesi akabatana uye anozopedzisira aenda kumagumo makuru. Chero zvazvingava, vanyori vaviri Matthias Prinz naMartin Kallenborn vari kuita zvakawanda chaizvo neRedcliff Bay Mysteries: unogona kutanga mukati menguva pfupi, mirairo mipfupi chete chiratidzo cheizvi. Zvikasadaro, musimboti wemutambo unozivikanwa: verenga makadhi kuti uwane fungidziro yeakateerana emitambo zviitiko, saka yave nguva yemapuzzle. Kusiya padivi nyaya yekutanga - iyo dzidziso - vatambi vachaunzwa nedambudziko rimwe chete kana maviri - avo vane ruzivo mumhando iyi havazove nedambudziko rekufumura zvakavanzika zvakatenderedza dhorobha reRedcliff Bay.
Iyo huru yekukurudzira ndeye - uye izvi hazviwanzo mune imwe nzira mechanic puzzle genre - iyo nyaya: inonakidza uye inochengeta matikitivha ari mumutsara - asi haufanirwe kutarisira akadzama King chakavanzika anonakidza ane meseji inoshoropodza munharaunda.
Kutenderera-ne-kutenderera sarudzo dzakamirira vatambi, nekuti kudzikisira kunoreva kuti haugone kuenda kunzvimbo dzese zvisina tsarukano. Saka iwe unosarudza danho rinotevera pamwe chete mukati meboka - mukana mukuru wemutambo webhodhi - kana kuti unovimba nezviratidzo zvechiito se "nzira yehupenyu". Makadhi ehint anobva aita semambure uye akapetwa kaviri pasi, anogona kushandiswa kana vaongorori vasingachaziva zvekuita.
Redcliff Bay Mysteries inopa yakabatana mutambo wemitambo iyo inotoita kuti iwe ude mamwe makesi ane cliffhanger yayo. Zvinotarisirwa hazvifanirwe kuiswa zvakanyanya, zvisinei, boka rinotarirwa rakatsanangurwa zvakajeka: vatambi vemhuri, vekutanga vemhando kana avo vanofunga kunze kwebhokisi vachave nechido nezvechakavanzika adventure kumaodzanyemba-kumadokero kweEngland uye vachakwanisa kukurudzira. ivo - puzzle pros vanozokwanisa kutarisa vakaonda makesi matatu pasina chidzidzo zvakanyanya kuwana kuzadzikiswa maererano nenyaya. Iyo yakanaka gimmick iyo mimwe mitambo yepuzzle inogona kudzidza kubva pakugadzirisa nyaya: Ungave wakarurama kana kwete, unogona kuziva kubva kune "tambo ine mavara".
Icho chokwadi chekuti neRedcliff Bay Mysteries Kosmos haisati yangoburitsa chunk yemapuzzle emuchina, asi mutambo usina kudzika wepuzzle une nyaya isinganzwisisike, unoraira ruremekedzo tichitarisa rudzi ruchiri kuwedzera - shure kwezvose, vanofa-vakaoma gamers. angadai akatsamwiswa nematambudziko akaomarara uye nekudaro akapinda muhurukuro nevatambi vanowanzouya. Redcliff Bay Mysteries inoyevedza yakawanda-yemusika chigadzirwa, asi haina kushata. Kusiyana neizvi: mitambo yevatikitivha bhodhi haina kumbove yakanaka uye ichivaraidza panguva imwe chete.
KOSMOS 680459 Redcliff Bay Mysteries, gadzirisa pamwe chete... * 26,99 EUR tenga
mhedziso Redcliff Bay Mysteries mutambo wekubatana wekubvisa une nyore, dzimwe nguva zvakaoma mapuzzle. Mhosva ina dzinotamba zvakasiyana asi dzakabatanidzwa: iyi pfungwa inoshanda. Mafeni erudzi urwu achawana diki matipi emukati kubva kune mukuru muparidzi pano.
Kare Weird West isati yaburitswa: Tamba muGame Pass kubva pakuvhurwa
Inotevera WrestleMania: WWE SuperCard ine nhanho nyowani uye mutambo maitiro
Elden Ring Inobuditsa Nzira: Musoro Wekuonekwa PaTaipei Game Show
Muyedzo: Risk Star Wars - Iyo Trilogy
Board game wongororo yeCities Skylines: Paradoxical Construction Game